Alahady 24 Novambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 24 NOVAMBRA 2019
Alahadin'ny Zanaka Ampielezana
« Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy. » (Matio 16:24)
Misaotra an’Andriamanitra isika fa nahatratra izao alahady ivon’ny herinandrom-bokatry ny zanaka ampilezana izao. Androany koa no nitondrana am-bavaka ny KPMS – Komitim-pirenena miady amin’ny Sida ary mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Ho avy amin’ ny heriny ny Tompo ». Nitarika ny fotoana ny filohan’ny Fikambanan’ny zanaka ampielezana Rtoa Deborah Rakotosalama ary ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana. Teo am-panombohana dia niarahaba ny Mpitandrina Rabenary Charles Anthony Evanjelistra mitandrina ny Fitandremana Andriamingodana Fahazavan i Kristy SP Atsinanana Ankaratra Fahazavana, izay nitondra ny hafatry ny Tompo.
Taorian’ny famakiana ny Salamo fiderana faha 98 : 4 – 9 dia natao ny hira faha 200 taonan’ny Sekoly Fjkm.
Tamin’ny vavaka fiderana no nisaorana an’Andriamanitra fa tsara indrindra Izy. Hendre ny fitiavanao, hoy izy, fa notaominao eto am vavahadin’ny lanitra izahay fa tianao ho hainay fa ho avy am herinao tokoa Ianao. Mahery ny fitiavanao fa nomenao fotoana izahay ary tsy manafina aminay izay tokony hataonay izahay. Raha ho avy Ianao dia hamaly anay amin’ny asanay, aoka hiomana am-panahy izahay amin’ny fihavianao izany. Mifona aminao izahay fa firifiry moa no hahenoanay ny amin’ny fiavianao nefa tsy taitra akory izahay fa lasa fahazarana ao amin’ny sofinay izany. Mamindra fo aminay, mibebaka izahay ary velaro eo anatrehanay ny fitiavanao izany.
Nitohy tamin’ny feon’orga izany.
Niroso avy hatrany tamin’ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady. Nanomboka tamin’ny vavaka izy ary ny Salamo 34 : 13 no novakiana « Dia arovy ny lelanao amin’ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. » Tantara no nentin’ny mpitarika. Fianakaviana iray no nanana saka ary tian’ny rehetra tao an-trano ka nokarakaraina. Rehefa tsy hita dia mipenopenona mitsabo, nefa indray andro dia nitondra bibilava dia voaroaka ilay saka. Nalahelo ilay saka dia lasa nariany ilay bibilava dia niverina tao an-trano izy dia voakarakara tsara indray. Toy izany isika fa rehefa miteniteny foana io vavantsika io dia tezitra amintsika ny Tompo. Arovy ny lelanao amin’ny ratsy sy tsy hiteny fitaka. Nanao ny hira Ffpm 625 : 4 ireo mpikambana sekoly Alahady taorian’izany.
Ho fiomanana amin’ny famakiana ny Soratra Masina dia natao ny Ffpm 210 :2, 4 ary niroso tamin’ny vavaka. Ireo mpikambana zanaka ampielezana no nanatanteraka izany. Atoa Andriamanana Toky Tsitohaina no nanao izany vavaka izany ary Atoa Randriamanana Anjasoa no nanao ny vakiteny. Ny perikopa anio dia nalaina tao amin’ny Malakia3 : 19-24, Matio 16 :24-28, Apokalipsy 22 :12-16. Natao ny Ffpm243 :1,2,4 mialoha ny hafatra.
Nandray evanjelistra moa ny fitandremana ka ny mpitandrina Rabenaly Charles Anthony, no tonga namangy ny Fiangonana anio. Izy dia manao stage passif teto Amparibe ary mpampianatra sekoly Alahady teto antoerana, ary ankehitriny dia manatanteraka ny asa eny amin’ny fitandremana Fierenana Fahazavana. Izy no nitondra ny tenin’Andriamanitra ka vavaka no nanombohany izany. Refa manao asan’ny mpitandrina hoy izy dia mila mahatanty. Ny toerana misy ity mpitandrina ity dia miala Taxi brousse mandeha Ambatolampy , mandeha Telozoro, miatsinanana 10km, commune Mirarano.
Rehefa avy nanambara ny toerana misy azy ny mpitandrina dia nitondra ny hafatra. Ho avy amin’ny heriny ny Tompo. Ho avy haninona nefa ny Tompo ? Tsara izany fihavian’ny Tompo izany ho an’izay manaiky ny teniny. Izay no antony mila hiomanantsika mba ho tsara ho antsika izany fihaviany izany.
1-	Raha te-ho any an danitra dia tsy maintsy manaraka an’Jesoa
Rehefa tena mianatra ianao dia afa-panadinana. Manoatra noho izanay ny tenin’Andriamanitra, fa raha manaiky an’I Jesoa Kristy ianao dia mahazo ny fiainana mandrakazay.
Tsaravo fa famonjena maimaipoana ny fivavahana kristiana. Fa hoe Jesoa Kristy tamin’ny mpianany « Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy. » (Matio 16:24) Raha amin’ny maha olombelona dia sarotra izany kanefa tsy maintsy mandray an’Jesoa Kristy, Izay velona ao anatiko. Tena hatao “copier coller” mba hitovy Tanteraka Aminy ianao.
Havaozy ny fanoloran-tenanao fa ny famonjena dia ho an’ny tsirairay. Mitondrà ilay hazo fijaliana nefa aza maika hitondra tsofa satria mavesatra dia ho tsofaina hanesorana. Aza mitaraina mitondra azy raha tena mavesatra, io no sahaza anao ka tokony ho zakaina. I Jesoa dia nitondra hazo fijaliana hatramin’ny fahakeliny hatramin’ny nahafatesany.
Raha izy Evanjelistra dia 18 taona no niasany amin’ny maha mpitandrina ary nanao am-pifaliana na dia mafy aza ny asa fa manantena kosa ny fiainana mandrakizay izy. Mila mahavery ny aina isika ho an’I Kristy. Ny ataontsika ihany no hitsarana antsika koa atolory zato isan-jato ny tenanao
2 Mila mikatsaka ny fanjakany ianao
Inona moa no soa azonao hijery ny harenanao raha ho faty ianao, katsao aloha ny fanjakan’Andriamanitra. Aza mandany andro fotsiny fa atolory ny tenanao, ho tonga zanak’Andriamanitra ianao. Ny Fiangonana Amparibe amin’ny maha famonjena azy dia fitaovana hamonjena, asan’ny finoana izany. Mpanompon’Andriamanitra ianao, ka tohizo izany fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny Tompo.
Tsara ny Tompo ka mitady fitiavana avy aminao Izy fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay
Vita ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny RFF “Mandehana, Manaràna “
Hoy ny mpitarika : “ Raha tena an’I Jesoa ve isika ka tena nikatsaka ny fanjakan’Andriamanitra dia vonona ve isika ? Mbola tsy tara izao ary fotoana hamindran’Andriamanitra fo amintsika. Handeha ary hifona amin’ny vavaka isika”. Hoy ny vavaka nataony: Tsy nafeninao ny sitraponao ary misaotra noho ny hafatra nentin’ny mpanomponao. Mahatsiaro menatra sy mangaihay izahay mahita ny zavatra nataonay sy ny aty anatin’ny fonay. Ianao no mpamela heloka dia mangataka ny famindrapo izahay. Na dia ampianarina aza izahay mba hikatsaka ny fanjakanao dia zara aza izahay raha mivavaka, mifona izahay. Tantano izahay hiara-handeha aminao amin’izao sisa izao. Henoy izany vavaka ataonao izany.”
Natao ny fanekem-pinoana laharana 4 taorian’izay.
TATITRY NY ZANAKA AMPIELEZANA
Tao amin’ny tatitry ny zanaka ampilezana no notsahiviny ny natao nandritra ny herinandrom-bokatra tamin’ny herintaona. Ny 11/01/19 ny fifampiarahabana sy fiaraha miala hetaheta. Notanterahana ny herinandrom-bokatra 2019 ary tao ny fotoana alarobia niaraka tamin’ny mpianatra Soratra Masina sy ny fotoam-bavaka zoma. Nanao fisaorana ny Mpitandrina sy ny Evanjelistra, ny Fiangonana sy ny zanaka ampilezana izy. Ny fifampiarahaba amin’ny taona ho avy dia ny alahady faharoa ny volana febroary
Taorian’ny fanambarana ny raharahan’ny Fiangonana dia nandray fitenenana ny Mpitandrina ka niarahaba ny fikambanan’ny Zanaka Ampielezana nitetrika ny fotoana. Nisy 61 ny zanaka ampielezana niara-nivavaka androany. Manamafy ny fankasitrahana ny Fiangonana amin’ny entana nentina tany Fianarantsoa ary nisaotra ny STK Zokiny namita ny iraka. Nanentana amin’ny fianarana ny fety krismasy na ny ankizy izany na ny lehIbe. Niantso amin’ny fianarana katekomena hanomboka amin’ny alahady faharoan’ny desambra sy ny fianarana Sefala . Fisaorana sy fankatelemana ny tanora manao fanatanjahan- tena miady ny amboaran’ny Filoha no nasetriny. Farany dia nanamafy ny fandraisana ny Evanjelistra izay manambady sy miteraka 5 izy.
Niroso tamin’ny fanatitra sy fanononana ny voady sy raki-pisaorana avy eo. Teo am-panombohana dia nanatanteraka ny fanatitra teny amin’ny alitara ny zanaka ampielezana sady nohiraina ny hira “O ry Amparibe izay nitaiza “. Ireo hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana dia ny Ffpm 537/1, Ffpm 471/2 , FF 30/2. Ny hira nanolorana ny rakitra dia ny ffpm 441 : 1,3 “Raiso aho Tompo ô”
Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina avy eo. Izay mino Anao dia manaraka anao hatrany ary rehefa manaraka anao dia mankato ny fepetra, anisan’izany ny hikatsahana ny fanjakanao ka na dia tampoka aza dia ho vonona izahay. Mivavaka ho an’ny Fiangonana , ny mpitondra Fiangonana hahavita tsara ny iraka sy adidy. Nivavaka ho an’ny Zanaka Ampilezana mijoro vavolombelona any amin’ny sehatra misy azy any sy ny fikambanan’ny Zanaka ampilezana. Nitondra am-bavakana ny mpitandrina izay nitory ny Teny, ny fiangonana izay entiny, ny KPMS mba hahavita ny asany. Nivavaka izy ho an’ny tanoran’ny fiangonana mandray anjara amin’ny fifaninanana fanatanjahantena hiatrika ny famaranana mba omenao Fahendrena, faharisihana ka ho tanteraka tokoa ny hitondrany ny amboara, hamoaka azy ho mpandresy.
Nitondra am-bavaka izay hanao Sefala, aza avelanao hangatak’andro, izay hiomana ho mpitandrina, ho an’izay hiomana hiray latabatra Aminao, ny ankizy ny tanora ny olon-dehibe hazoto amin’ny fianarana fety krismasy amin’ny fihetsika vaovao. Nivavaka izy ho an’ireo sahirana, marary, mana-manjo, izay voan’ny tsindry hazo lena, izay manana hataka manokana. Nentiny am-bavaka ny filohan’ny Fjkm sy ireo ray amandrenim-piangonana, ho lavorary ny andraikiny, ireo nanao voady masina sy raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Taorian’ny fihirana ny hira 654 : 1, 3 , 4 dia notonina ny tondrozotra ary natolotra ny tsodrano dia nohiraina ny “Mialoka Aminao”.
Nisy ny fiaraha-mihombona latabatra amin’ny Tompo avy eo.
Rakotovololona Lova no teo amin’ny fanamafisam-peo, Rabako Tovohery no teo amin’ny fàfana elektronika, Rabiazamaholy Hery Lanto no teo amin’ny orga.
Naka ny sary : Rakotondramboa Andry Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra sy Seta Rajaofetra.